IBorrasca Miguel: izici, ukwakheka nemiphumela | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Siyazi ukuthi isimo sezulu singalindeleka ngoba kungumphumela wokushintshashintsha kwenqwaba yezinto eziguqukayo ezishintsha amanani azo ngesikhathi esifushane. Omunye wemiphumela yalezi zinguquko kwezemvelo kwaba yi squall Miguel. Futhi ukuthi ngenyanga kaJuni 2019 i-cyclogenesis eqhumayo yezinto ezinelukuluku kakhulu futhi engajwayelekile yenzeka. Kwakuyisiphepho esikhulu futhi kwenzeka inqubo yokuqhuma kwe-cyclogenesis ezindaweni eziphansi. Le yinto engakaze ibonwe phambilini futhi abaningi bayihlobanisa nokushintsha kwesimo sezulu.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici, imvelaphi kanye nemiphumela yesiphepho uMiguel.
2 Izimbangela zesiphepho uMiguel
3 Ukwakheka kwesiphepho uMiguel
4 Iziphetho zalesi simanga esixakile
Iningi lezazi zezulu nababikezeli bezulu abakholwanga obekusiza ekuqaleni kukaJuni 2019. Isiphepho esikhulu sasizokwenzeka enyakatho-ntshonalanga yeNhlonhlo Yase-Iberia ngasikhathi sinye lapho sasizobhekana nenqubo yokuqhuma kwe-cyclogenesis. Kuyinto engavamile kakhulu hhayi kuphela ngesikhathi sonyaka lapho kwenzeka khona, kodwa futhi nasezindaweni lapho inhlonipho yethu ikhona khona.
Lezi zakhiwo nezingcindezi zenqubo yokuphila zijwayele kakhulu ezinyangeni ezibandayo zasebusika nasezindaweni eziphakeme noma maphakathi noLwandlekazi i-Atlantic. Kumele kubhekwe ukuthi ukwakheka kweziphepho kuvame ukwenzeka ebusika ngoba ukuguquguquka kwesimo sezulu kumele kuthathe amanani athile ukuze kwenzeke. Singasho ukuthi isikhathi sokwakheka kwesiphepho esijulile nezinqubo ze-cyclogenesis ziyasebenza kakhulu futhi zinamandla kakhulu ebusika enyakatho nenkabazwe.
Ngesinye isikhathi, ukwakheka kweziphepho nakho kungenzeka ezinyangeni zasentwasahlobo nasekwindla, kepha kuyaqabukela ehlobo. Lesi ngesinye sezizathu zokuthi kungani Isiphepho uMiguel besingalindelekile futhi sinelukuluku lokwazi. Izimbangela noma izici zeziphepho ezijulile nezinqubo ze-cyclogenesis ziyasebenza futhi zinamandla kakhulu ngezikhathi zobusika enyakatho nenkabazwe.
Izimbangela zesiphepho uMiguel
Ake sibheke ukuthi yiziphi izinto ezidale isiphepho uMiguel nokuthi kungani zenzeke ngalesi sikhathi sonyaka. Umfula i-jet ukuphakama ungumshayeli oyinhloko weziphepho zase-Atlantic ngoba unamandla kakhulu futhi uphansi ebangeni elihambisanayo neNorth Atlantic Ocean. Ukuqhathanisa okushisayo phakathi kwesisindo esishisayo noma esishisayo esifudumele ndawonye umoya obandayo we-polar air yiwona obonakala kakhulu ezinyangeni ezibandayo. Kumele kucatshangwe ukuthi lokhu kuqhathanisa okushisayo kanye namandla we-jet polar kubangela umphumela omkhulu kakhulu wokudangala odala isivunguvungu esikhulu.
Ukulahleka kwesibili okwenzeka kule ndawo ye-gradient eqinile yokushisa kuningi kakhulu phakathi nezinyanga zasebusika. Lokhu kubangela nokuthi amazinga okushisa ahluke. Okunye okungenzeka kube yisiphepho seMiguel ukukhishwa komoya obandayo opholile ovame ukuhambisana nokungena okunamandla kwejet futhi kungathwala amagagasi ashumekiwe angabhekana nenqubo yokwakhiwa kwengcindezi ephansi kanye ne-cyclogenesis.
Kunezinye izinto zesibili ezingavuna izinqubo ze-cyclogenesis ebusika, yize kungabalulekanga kangako kuleli cala. ICyclogenesis iyi ukwakheka kweziphepho ikakhulukazi okubangelwa ukwehla kwengcindezi yasemkhathini. Uma sikhuluma nge-cyclogenesis yokuqhuma, sibhekisa ekwehleni ngesihluku kwengcindezi yasemkhathini futhi ngenxa yalokho isiphepho esinamandla senziwa. Kokubili i-cyclogenesis ne-jet stream yizona zinto ezibalulekile ekuthuthukiseni, ekulondolozeni nasekujuleni kweziphepho.
Ukwakheka kwesiphepho uMiguel
Lesi siphepho sakhiwa ngaphansi kobukhona bezithako ezijwayelekile ze-cyclogenesis nokujula okusheshayo. Ukuphakama okukhulu komoya, i-jet polar nokwehla emazingeni aphansi kwakutholakala endaweni yokuqhathanisa okuqinile okushisa, okwaziwa njengendawo ye-baroclinic ezingqimbeni eziphansi.
Ekuqaleni kukaJuni kungabonakala ukuthi ukusakazwa kwejet kushubile impela futhi nobubanzi sebunciphile. Ngakolunye uhlangothi, ukuqhuma okubandayo okuhambisanayo nakho kuphawulwe kakhulu futhi kuqhathaniswa nesisindo somoya oshisayo esivele sikhona ngenxa ye-anticyclone engenamandla futhi engenzi lutho. Umphumela wakho konke lokhu wukwanda kwe-gradient eshisayo engezansi kwe-axis yejet. Okungukuthi, i-baroclinity eqinile. Isekondari engezansi ezingqimbeni eziphansi ezazisendaweni ye i-gradient eqinile yokushisa yiyona ebhekana nenqubo yokuqhuma kwe-cyclogenesis.
Lesi simo sonke besingathandeki esimweni saso nasekuqineni kwaso. Ngenxa yalesi sizathu, isiphepho uMiguel singajwayelekile ukuthi singafani. Ukwenza lokhu, kukhonjiswa amamephu angajwayelekile we-anomaly asikhombisa izinga lokungajwayelekile okungavezwa ngumsakazo we-jet namandla alo. Ijet iyona protagonist eyinhloko yalesi simo sonke. Lokhu kungenxa yokuthi uma indiza ifika kakhulu emazingeni aphakeme kakhulu, ezindaweni eziphansi kungenzeka ngayo isivinini somoya esifinyelela ku-150-200 km / h. Kwakungeyona futhi ejwayelekile kakhulu umoya obandayo wangemuva oholele i-jet polar futhi okwenza i-baroclinity yanda kakhulu endaweni lapho kwakhiwa khona isiphepho saseMiguel.
Iziphetho zalesi simanga esixakile
IScall Miguel bekuyinto engajwayelekile eshiye ababikezeli bezulu nababikezeli benokunambitheka okungajwayelekile emilonyeni yabo. Singasho ukuthi ukwakheka nokujula kokwehla yizinto eziyivelakancane ngokuya ngabanduleli kepha futhi ziyivelakancane kulolu hlobo lwesikhathi sonyaka. Kuphetha ukuthi ubemandla kakhulu ngendawo ye-baroclinic ku izingqimba eziphansi kakhulu zendawo kanye nosuku ebesikuyo.
Zonke lezi zizathu zenze ukuthi isiphepho uMiguel singene emlandweni njengesinye seziyivelakancane selokhu isimo sezulu saqoshwa. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngesiphepho uMiguel, izici zaso nokwakheka kwaso.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » I-squall Miguel